Barakacayaasha gobolka gedo oo badanaya – Source Garcinia Cambogia | Quick Way to Lose Weight
Tirada Dadka Barakacayaasha ee soo gaaraya gobalka Gedo ayaa sii kordhaysa iyadoo Magaalada Beledxaawo ee Xaduuda Kenya Dhacda ay kamid tahay Magaalooyinka ugu Badan ee Martigelisay Mowjadaha Barkacayaasha ee kasoo deelaabay (Kayimid) Xaafadihii ay kulahaayeen Magaalada Muqdisho oo ay kajiraan Xaalado Dagaaleed.
Dadka kasoo Barakacay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay isugu jiraan Haween, Caruur iyo dad kale oo Da’ah, waxaana dadkaasi haysata Daruufo dhinaca nolosha ah.
Wariyaheena Gobolka Gedo ayaa kusoo waramaya in Haweenka ay yihiin kuwa ugu daran ee ay haysato Daruufta, Waxaana soo Foodsaara dhibaatooyin ka Ballaaran Midka haysta Bulshada inteeda kale ee kunool xerooyinka Qaxootiga, taasna waxaa ay Falaar Wadnaha ku taaagan kunoqtay Hooyooyinka Soomaaliyeed oo Rajadoodu tahay mid Ceel kasii Dhacaysa.
Hooyooyinka Soomaaliyeed oo Gacanta iyo Dusha kusida Dhalaan aan loo hayn Hoy(Guri), Caano iyo Coodkalaba Islamarkaana aysan Jirin Aabayaal kuwehlinaya Barakacooda ayaa Maalinkasta Gaara Xerooyin ay degan yihiin dad Barakacayaal ah oo kutaal Cirifka Galbeed ee Magaalada Beledxaawo.
Xaawo cumar waa Hooyo soomaaliyeed haysata Afar caruura oo agoomo ah sida ay sheegtay,ilmaheeda aabohoodna uu ku geeriyooday dagaalada ka socoda Magaalada Muqdisho xili uu ku sugnaa dukaan uu kulahaa suuqa bakaaraha oo madfac habaw ah uu burburiyey isaga iyo dukaankiisii.
xaawo oon kula kulmay xerada xuduuda oo ay barakacayaal badan ku jiraan xili uu halkaasi gaari ku dajinayey ayaa waxa ay iiga sheekaysay safarkeedii ay Muqdisho ay ka soobilowday ilaa iyo B/xaawo oo ay dhibaato kala gadisan ay kala kulantay wadada oo ahayd markii ugu horaysay ay ku safarto, waxayna intaasi ku dartay in ay damacsan tahay in ay gaarto xeryaha qaxootiga Dhadhab ee Dalka Kenya.
Dhanka kale Gudoomiyaha Xerada barakacayaasha xaduuda oo ay boqolaal qoys ku jiraan ayaa ka deyriyay xaaladooda nolaleed xili lagu gudo jiro bisha Barakaysan ee Ramadaan.
Dhuuboow Cabdi Baash oo isagana ah hor joogaha xerada ayaa sidoo kale baaq udiraya Hay’adaha Gar gaarka ee caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ah ee ka howlgala Gobalka Gedo iyo jaaliyadaha soomaaliyeed in ay gargaar dagdag ah la soo gaaraan xerada barakacayaasha qaxootiga ee Magaalada B/xaawo oo tirada barakacayaasha ku sii kordhaayaan maalinba malinta kasii dambayso.
Warkaa Waxaa Soo diray
Maxamed Jaamac Seed.
Wararkii ugu Danbeeyay ee Dalka iyo dibada kala soco saacad Walba
Short URL: http://somalinewsonline.com/?p=290